Waancaa Karaba`oo injigilaandiin Cheelsiin yoo injifatu, Tootinhaam dorgommichaan ala ta`e. - ! - OBN
Waancaa Karaba`oo injigilaandiin Cheelsiin yoo injifatu, Tootinhaam dorgommichaan ala ta`e.
OBN Amj.20 05 11- Cheelsiin goolii 3-0 Sheefildi Weednesday injifachuun darbe.
Wiiliyaan goolii lama Hudson Odoi goolii tokko taphataa galche.
Leenjisaan Ittii aanaan Cheelsii Jian Firaankoo Zoolaan qabxiin arganne gaariidha,gammanneerra,Gahumsa Gonzaloo Higuen mul`isetti booneera jedhan.
Leenjisaan Yeroo Sheefild Steve Agnew 3-0 moo`amuu keenyatti gaddus taphattootni waan irraa eegamu bahataniiru jedhan.Cheelsiin kubbaa kallattiishee eeggatte sadii gara gooliitti yaalee sadanuu galcheera.
Salhurst paarkitti Tootinhaam kan simate Kiristaal Paalaas goolii 2-0 injifatee darbe.Tootinhaam guyyoota afur gidduutti dorgommii lama keessaa bahee jira. Kamisa darbe Waancaa Karaba`oon Cheelsiin moo`amee osoo xumuraaf hin gahin hafuunsaa ni yaadatama.
Konor Wikham fi Andre Townsend goolii lamaan taphatttota kiristaal paalaasif galchani.K.Paalaas bara 2015-16 boodaa FA marsaa 5ffaaf gaheera. Tootinhaam taphoota hundaan taphoota afur as dhihoo taphate keessaa sadii moo`amuun seenaa gadi aanaa taphoota 22 sana duraan hin galmeessine galmeesse.
295 Views 1/28/19